Fahasamihafana eo amin'ny Alanesan'ny rojo mahitsy sy branched | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Alanesan'ny rojo mahitsy sy branched | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / Simia biolojika / fahasamihafana misy eo amin'ny Alkanes rojo mahitsy sy branched
Fahasamihafana eo amin'ny Alkanes mahitsy sy branched
11 Novambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny alika mivantana sy ny branched dia ny alkanes misy rojo mahitsy, ny atôma karbonika rehetra dia mifamatotra amin'ny tsirairay ary mamorona rojo mitohy fa ny alkanes misy rojo branched kosa dia rojo miraikitra mifatotra amin'ny rojo karbaona mitohy.
Ny Alkanes dia fitambaran'ny hydrocarbon misy atôma karbonika sy hidrogen miaraka amin'ny fatorana tokana eo anelanelan'izy ireo (tsy misy fatorana roa na fatorana telo eo anelanelan'ny atôro karbonika). Miorina amin'ny firafitr'izy ireo, misy karazana alkanes roa toy ny alkanes misy rojo mahitsy sy alkanes misy rojo vy.
2. Inona no atao hoe Alkanes mahitsy
3. Inona no atao hoe Alkanes Chain Branched
4. Fampitahana mifanila - Alkanes mahitsy miady amin'ny branched amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Alkanes mahitsy?
Ny alkanes mahitsy dia fitambarana hidrokarôbonina misy rojo atôma karbonika mitohy misy atôma hydrône. Ny alkana dia fitambarana tsy misy afa-tsy fatorana tokana eo anelanelan'ny atôro karbonika. Ny alkanes mahitsy dia alifatika satria tsy misy firafitra na tsy mahasalama an'ireo fitambarana ireo. Ankoatr'izay, ny alkana mifangaro mahitsy dia singa matevina satria tsy misy fatorana roa na telo eo amin'ny atôma karbonika.
Sary 01: firafitry ny alkane rozy mahitsy
Ny firafitry ny molekiola ankapobeny amin'ireto fitambarana ireto dia manaraka ny lamina C n H 2n + 2 . Tsy misy rojo vy na vondrona pendant mifatotra amin'ny rojo karibonetra mitohy amin'ireo molekiola ireo. Rehefa manonona alkane misy rojo mahitsy isika dia mila mampiasa préfiks izay mamaritra ny isan'ny atôma karbonika ao amin'ny molekiola ary mifarana amin'ny "-ane" ilay anarana, izay manondro fa alkane io. Ohatra, ny alkane mahitsy mifangaro manana atôma karbaona dimy dia mitondra ny anarana hoe "pentane" (pent + ane).
Inona no atao hoe Alkanes rojo vy?
Ny alkanes rojo branched dia fitambarana hydrocarbon misy vondron-tsokosoko miraikitra amin'ny rojo karbaona mitohy. Ireo rojo sisiny ireo dia antsoina hoe sampana. Noho izany, ireo fitambarana ireo dia tsy hydrocarbons mivantana. Satria alkanes izy ireo, dia tsy misy fatorana roa na telo eo amin'ny atôro karbonika. Noho izany, ireo molekiola ireo dia fitambaran'ny voky. Ny sampana misy ao amin'ireo molekiola ireo dia misy methyl, etil, propyl, sns.
Rehefa manonona alkane rojo branched dia hafa ny rafitra nomenclature raha oharina amin'ny nomenclature alkane mahitsy. Eto, tsy maintsy asehontsika koa ny anaran'ny sampana. Ny anaran'ny rojo mitohy dia antsoina hoe anarana misy. Rehefa manonona ny sampana isika dia tsy maintsy mampiasa ny tovana hoe "–yl" fa tsy "-ane" miaraka amin'ny isan'ny atôma karbonika ao amin'ilay sampana. Ohatra, methyl, etil, sns Na izany aza, sarotra ny manome anarana alkane rojo vy. Noho izany, zava-dehibe ny mahatadidy ireto dingana manaraka ireto;
Voalohany, tadiavo ny rojo karbaona lava indrindra (tohotra rojo) ary omeo anarana izany.
Tadiavo ireo rojo vy ary omeo anarana ihany koa.
Omeo isa ireo atômôna karbaona tsirairay amin'ny fomba ahazoan'ny rojom-bika ny isa ambany indrindra.
Soraty amin'ny abidia araka ny abidia ny anaran'ireo rojo sisiny.
Mampiasà hyphen mba hampisarahana ny isan'ny rojom-baravarana amin'ny anaran'ny tsorakazo.
, Ohatra, ny sampana alkane manana vondrona methyl amin'ny 2 daty karbaona ny propane molekiola mahazo ny anarana hoe "2-methylpropane".
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Alkanes Chain mahitsy?
Ny Alkanes dia fitambaran'ny hidrokarbonôna misy atôma karbonika sy hidrôzenina izay tsy misy afovoany tokana. Ankoatr'izay, misy karazany roa ny alkanes toy ny alkanes mahitsy sy ny alkanes misy rojo vy. Ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny alika mivantana sy ny branched dia ny alkanes misy rojo mahitsy, ny atôma karbonika rehetra dia mifamatotra amin'ny tsirairay ary mamorona rojo mitohy, fa ny alkanes rojo branched kosa dia rojo miraikitra mifatotra amin'ny rojo karbaona mitohy.
Ity ambany ity ny infographic dia mampiseho antsipiriany misimisy momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny alkanes mahitsy sy branched.
Famintinana - Alkanes Chain mahitsy vs Branched
Ny Alkanes dia fitambaran'ny hydrocarbon misy atôma karbonika sy hidrôzenina izay tsy misy afovoany tokana. Miorina amin'ny firafitr'izy ireo, misy karazana alkanes roa toy ny alkanes mahitsy sy ny alkanes misy rojo vy. Ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny alika mivantana sy ny branched dia ny alkanes misy rojo mahitsy, ny atôma karbonika rehetra dia mifamatotra amin'ny tsirairay ary mamorona rojo mitohy, fa ny alkanes rojo branched kosa dia rojo miraikitra mifatotra amin'ny rojo karbaona mitohy.
1. Helmenstine, Anne Marie. "Definition Chain Alkane." ThoughtCo, Oktobra 1, 2019, Azo zahana eto .
1. "Butan Lewis" Nosoratan'i NEUROtiker ⇌ - Asa manokana, Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. "IUPAC-alkane-1" Nosoratan'i Fvasconcellos 20:04, 8 Janoary 2008 (UTC). Sary tany am-boalohany avy amin'i DrBob (resaka · contribs). - kinovan'ny sary: ​​Iupac-alkane-1.png nataon'i DrBob (resaka · contribs) (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
Fahasamihafana eo amin'ny Ethylene Glycol sy Diethylene Glycol Fahasamihafana eo amin'ny asidra methanoika sy asidra Ethanoic Fahasamihafana eo amin'ny Acetylene sy Ethylene Fahasamihafana eo amin'ny esterification sy ny saponification Fahasamihafana eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl
Fahasamihafana eo amin'ny C sy ny tanjona C
Fahasamihafana eo amin'ny Sony Playstation 3 (PS3) sy PS3 Slim
Fahasamihafana eo amin'ny filantropy sy ny andraikitra ara-tsosialy
Fahasamihafana eo amin'ny Actinomycosis sy Actinobacillosis
Fahasamihafana eo amin'ny Ivotoerana ahazoana tombony sy ivotoerana fampiasam-bola